Fanatsarana ny fahombiazan'ny Lightroom Classic 7.2 ho avy tsy ho ela | Avy amin'ny mac aho
Fanatsarana ny fahombiazan'ny Lightroom Classic 7.2 ho avy tsy ho ela
Javier Porcar | | About us, Fampiharana hafa ho an'ny Mac, maro
Ny fanavaozana ny Lightroom manaraka, fantatra hatramin'ny volana Oktobra ho Classic, dia hahatratra ny andiany 7.2. Ity kinova vaovao ity dia hifantoka amin'ny fanatsarana ny fampiharana amin'ny ankapobeny. Na izany aza ity rindrambaiko ity dia manana toerana betsaka hanatsarana amin'ity tsena mpifaninana ity, na eo aza ny fitomboana niainana tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Ireo mpandrindra dia niara-niasa tamin'ny Intel tato anatin'ny herinandro vitsivitsy, miaraka amin'ny fikasana hamongorana ireo fizotrany tsirairay ny fampiharana ary nohamarinina tanteraka. Izay nahitan'izy ireo ny fihenan'ny fizotrany dia ao amin'ny Mac misy RAM 12 GB latsaka, izany hoe, ny ankamaroany.
Noho izany, izay Mac rehetra dia hahazo tombony amin'ny fanavaozana vaovao, amin'ny lahasa miverimberina indrindra. Manokana, tokony hahita fihatsarana amin'ireto dingana manaraka ireto ianao:
Fanovana fanovana amin'ny maodely fampandrosoana.
Fangaro HDR sy panorama.
Ny fitsapana natao hanombanana ity fanatsarana ity dia nampiasa iMac Pro 10-core sy 16GB RAM. Ireto ny fandrefesana dia misy ireto manaraka ireto:
Fanondranana JPEG: ny fizotrany dia natao tamin'ny fampiasana 29% kely kokoa ny fotoana.
Fanondranana DNG: amin'ity tranga ity, mahatratra 44% ny fanatsarana amin'ny kinova 7.2, ampitahaina amin'ny 7.1
Ny mpampiasa hafa dia te hanandrana ny fanatsarana amin'ny milina ambany. Amin'ity tranga ity, miaraka a 13 MacBook Pro 2016-metatra miaraka amin'ny Core i7 sy 16GB RAM, misy tombony 11%. Naneho izy ireo Valiny mitovy amin'izany amin'ny MacBook Pro 15-inch manomboka amin'ny 2015, mihazakazaka Core i7. Saingy, amin'ity fitaovana farany ity, ny mahagaga dia ny fanondranana endrika RAW avy amin'ny fakantsary Fujifilm, dia nihatsara hatramin'ny 80%
Ny kinova Lightroom Classic 7 dia tsy misy afa-tsy amin'ny famandrihana Creative Cloud. Ny fisoratana anarana dia mitentina € 11,99 / volana. Azontsika atao ny mizaha toetra azy ary misoratra anarana rehefa hitantsika fa mety. Ny kinova tsy misy famandrihana dia nifarana tamin'ny desambra 2017. Azo atao ny mahazo azy io, saingy tsy maintsy tadidintsika fa nijanona tsy nanohana an'ity kinova 6 ity i Adobe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Fanatsarana ny fahombiazan'ny Lightroom Classic 7.2 ho avy tsy ho ela
Javier Porcar dia hoy izy:
Misaotra an'i José tamin'ny fandraisana anjara ary miala tsiny amin'ny lesoka. Miezaka ny hanao ny asa araka izay tratra araka izay tratry ny asany izahay, saingy indraindray dia misy ny lesoka.
Valiny tamin'i Javier Porcar
José dia hoy izy:
Tsy misy antony tokony hifonana
Etsy andanin'izany: «tsy maintsy tadidintsika fa nandao i Adobe»
Ianao irery no mila manova izany
Apple Pay dia efa eken'ny mpivarotra iray amin'ny roa ao Etazonia
Apple hanidy Green Stores Apple Stores any Nashville sy Alderwood any Lyynwoord ho an'ny fanamboarana